सांसद गिरीले भने : बैंकहरुले सिण्डिकेट लगाए, उद्योगी निराश छन् – Parbat News
सांसद गिरीले भने : बैंकहरुले सिण्डिकेट लगाए, उद्योगी निराश छन्
२१ भदौ, काठमाडौं । बैंकहरुले अस्वभाविक रुपमा ब्याजदर बढाएका कारण उद्योगी र ब्यापारी आतंकित भएको भन्दै सांसदले यसलाई निन्यन्त्रण गर्न माग गरेका छन् ।
बिहीबारको संसद बैठकमा सांसद पदम गिरीले ब्याजदर बढेका कारण अहिले उद्योगी व्यापारी आतंकित भएको र देशमा औद्योगिक वातावरण नै समाप्त हुन लागेको दावी गरे ।
अन्य क्षेत्रमा सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने भने पनि बैंकहरुको सिण्डिकेटबारे सबै चुप लागेको भन्दै उनले ब्याजदर वृद्धिका कारण उद्योग व्यवसायमा आउन लालयित युवाहरु निराश भएको बताए । ‘उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्नु भनेको सुकुम्बासी बन्नु हो भन्ने भएको छ’ उनले भने ।
ब्याजदरकै कारण उद्योगी र व्यवसायी पलायन हुने र सरकारले राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसमेत पूरा नहुने खतरा रहेको सांसद गिरीले ताए । ‘उद्योग व्यवसाय छाडेर पलायन हुने स्थिति सिर्जना हुँदैछ । ब्याजदर वृद्धिका कारणले बस्तुको लागत बढेको छ, विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था छ’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो ढंगले ब्याजदर बढ्ने हो भने कसरी ब्यापार गरेर उद्यम गरेर खान सक्छन् ? हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन ?’
बैंकहरुले अन्य क्षेत्र चौपट भए होस् तर आफूहरु नाफा कमाउनुपर्छ भनेर लागेको सांसद गिरीले आरोप लगाए । ‘अन्य क्षेत्र घाटामा गए जाओस्, चौपट भए होस् केही छैन बैंकहरु नाफामै हुनुपर्ने ? अरु मरे मरोस् मेरो भुँडी भर्नैपर्ने भन्ने परम्परागत भनाइजस्तो बैंकले नाफा कमाइरहनुपर्ने अरु क्षेत्र धरासयी होस् भन्ने छ’ उनले भने ।
सांसद गिरीले बैंक र ऋणीबीच भएको सम्झौता एक वर्षसम्म परिवर्तन गर्न नपाउने नीति लगाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले हाल वाणिज्य बैंकमा रहेको ४.५ प्रतिशत र विकास बैंकमा रहेको ५ प्रतिशतको स्प्रेड दर ३ प्रतिशतमा झारेमा उद्यम गर्न चाहने युवालाई राहत हुने बताए ।
नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी पर्वतको अध्यक्षमा गिरी, कार्यकर्तामा उत्साह
शिवालय माबिका शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई आफैले पढाउने विद्यालयमा भर्ना गरे
पर्वतको मोदीमा कोशेली घर स्थापना,प्रदेशको विकास वायुपंखी गतिमा हुन्छः मन्त्री लम्साल
नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन पर्वतले २९ औं स्थापना दिवस मनायो
वारीबेनी–बाँसखर्क सडक कालोपत्रेमा सांसद गिरीको पहल, संसद वैठकमा प्रश्न गर्दै भने-“टेण्डर किन रोकियो ?”
गुप्तेश्वर बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियू कार्यवहाक अध्यक्षको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष भुषाललाई
पर्वत अस्पतालमा पहिलोपटक बिरामीमा रगत ट्रान्सफर